Nei NLP iri ramangwana reBusiness Intelligence - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Bhizinesi Njere, NLP
Pese paunoshandisa Google mubatsiri nezvemaresitorendi ari padyo, kuteedzana kwakaomarara kwekodhi yepamusoro kunogoneswa Iyi nhevedzano inobvumira mubatsiri wako kuti anzwisise mubvunzo wako uye nekukupa mhinduro yaunoda kumubvunzo wako. Pakutanga, isu taimboita kudyidzana nemakomputa nenzira inonzwisisika kwavari, isu tanga tadzidza mutauro wavo. Asi ikozvino vava kunzwisisa mutauro wedu?
Zvese izvi zvinogoneswa nekushandisa tekinoroji inonzi Natural Language Processing (NLP). Uye izvi zviri kutoshandura nyika yebhizinesi panguva inoshamisa.
NLP ndechimwe chezvinhu zvinoshamisa kwazvo zve chakagadzirwa njere. Iyo inzvimbo yesainzi inogonesa kudyidzana pakati pekomputa sevhisi nekushandisa mutauro wevanhu uye dzakasiyana siyana nzvimbo dzevanhu. Iyo inoshandisa masvomhu uye nzira dzekuverenga kuongorora mutauro unonzwisisika wemunhu kuti kuita kwekudyidzana kwemakomputa kuve kwakanaka uye kwakanaka. NLP inoshandisa machine learning kuita kuti kusangana kwevanhu-komputa kuve nyore.
Kuedza kwekutanga kwekudzidza mutauro wevanhu kwakaitwa makore angangoita makumi mashanu apfuura uye izvi zvakaitwa kuburikidza nenzira dzemakomputa. Kubva ipapo, zvinhu zvakasiyana-siyana zvakakonzera kukura uye mukurumbira weiyi tekinoroji. kusimukira uye kuwedzera kwesimba remakombuta kunotibvumira kubata huwandu hukuru hwe data inobatsira mukugadzirwa kwemhando dzakanyanya kuoma dzemasvomhu dzinosanganisira. kudzidza zvakadzika yeNeural network.
Chizvarwa chedu chiri kucherechedza kukura kwakasarudzika kwemazhinji-chiteshi dhata senge nharembozha kana data rezvemagariro, uye izvi zvakaisa kudikanwa kwetekinoroji dzakasimba kuti dziongorore uye dziwane zvinofungwa nemutengi.
Iko NLP yakamira kunge ikozvino
Maitiro azvino anoshandiswa kuongorora zviito zvevatengi anonzwa kunge echinyakare mune iri bhizimusi repasirese remakwikwi. Iko kune kudikanwa kwekunzwisisa izvo zvavanofarira uye mamoods emutengi. Sezvo tekinoroji icharamba ichikura, iko kushandiswa kweNLP kunozova kwakanyanya kutarisana nevashandisi uye ichashanda semugwagwa kune ramangwana rebhizinesi. Bhizinesi nhasi rinofanirwa kunge richichinjika uye richichinjika sezvinobvira nekwanisi yekukurumidza kuchinja semhinduro yekuchinja mumusika mamiriro.
Iko kune kuwirirana kunoenderana pakati peNLP uye business intelligence. Nekushandisa kweNLP, iyo BI yakavakirwa data inogona kuitwa kuti iwanikwe nyore. Natural mutauro interface inogona kuchinja kudyidzana kwedu nemaitiro akaomarara nedhatabhesi uye makuru madhatabhesi. Kune mabhizimusi makuru, zvinoita kwavari senzira yekubatanidza isiri-tekinoroji nedata ravanoda kutsigira sarudzo dzakakosha. Iko kushanda kweNLP mu business intelligence maturusi anogona kuita kuti zvive nyore kune vasiri-teki vanhu kutanga kuongorora dhata pachavo pachinzvimbo chekumirira nyanzvi dzeIT kumhanyisa mishumo yakaoma. Tinogona kutaura kuti ndiko kusununguka kweruzivo rwekuwana ruzivo, sezvo zvichibvumira munhu wese anobatanidzwa mubhizinesi kuti awane ruzivo kuitira kuti atore zvisarudzo zvine ruzivo.
Zano razvino reNLP rakanyanya kududzira mutauro wechisikirwo mumushini kana mutauro unonzwisisika wemakomputa. Nekudaro, pane mikana yakakwira yekutarisa uku kuti ishanduke pakuita kuti komputa inzwisise mubvunzo uye ibudise mhinduro dzakakosha pane kungo tsvagisa mhinduro. Munguva pfupi, nguva ichauya yekuti tichave tichiwana mhinduro mumitauro yechisikigo.
NLP inogona kuvandudza business intelligence munzira dzakawanda, kunyanya kana zvasvika pakuongorora zvinyorwa. Hazvishamise kuti hwakawanda hwakawanda hwehukama-hune hukama neruzivo mavambo ari mune isina kurongeka fomu. NLP inobatsira mukuburitsa mapatani mune akapararira data ayo anoita kuti ive inokodzera kumwe kuongorora.
Iyo NLP inogona kushandiswa muBI nekubatsira mukuongorora kwevatengi manzwiro, uchishandisa kugadzirisa mutauro mutauro matekiniki ekubvisa rumwe ruzivo kubva muchidimbu chezvinyorwa, izvi zvinozivikanwawo se kuchera pfungwa. Iyi nzira yave kutoshandiswa nemhando huru kuratidza manzwiro emutengi wavo, uye kuona kana iyo evanhu vezvenhau buzz dzakavakomberedza dzakanaka kana kwete.
NPL inobatsirawo mukupfupisa, muchidimbu unobatsira nekuita mapfupi vhezheni yechinyorwa chinyorwa pasina kushandura chinangwa nezvirimo zvepakutanga. Izvi zvinoshandiswa nemasangano enhau kuisa mumapoka, kumaka uye kupfupisa zvirimo uye kuwedzera kugona kunzwisisa panguva imwe chete.
Bhizinesi rekuchenjera ndichaenda kure neNLP. Kuwedzera kwekupinda kwedata uye nekuvandudza mhando yedata kunotendera bhizinesi kuchengetedza bhajeti uye nguva yekuita ivhu kugadzirira kuita sarudzo. Zvinotora masekondi kugadzirira misangano yebhizinesi uye kuwanikwa kuchazowanikwa nekukasira. Unogona kuwana vavhoterwa pasina nguva.
Maonero ehelical anobatsira vashandisi vebhizinesi vasina ruzivo rwehunyanzvi kuti vawane mhinduro dzemabhizimusi nekukurumidza nekunyora mumibvunzo yavo. Fungidzira, iwe unokwanisa kuwana mhinduro dzemibvunzo yakakosha chero, chero nguva nekungobvunza mubvunzo. Kana isu tikashandura BI kuita hurukuro neChatbot vanhu vanogona kuwana ruzivo zviri nyore nekungobvunza - "chii chiri shanduko yemari munzvimbo dzekupedzisira?". Pakutanga iwe unofanirwa kuve nemakore echiitiko uye kujairana neiyo software kuti unzwisise uye ubvunze mibvunzo uye uwane iyo inodiwa data, asi izvi zvachinja ikozvino nekubatanidzwa kweNPL.
Sezvo isingade GUI, iwe unogona kuiwana nyore nyore pairi kuenda. Iwe unogona kuita mibvunzo kuburikidza nemagwaro kana izwi mirairo pafoni yako uye kugadzirisa kunoitwa mugore. Zvino, unogona kushandisa nyore Google kukuudza nezvemamiriro ekunze emangwana asi munguva pfupi, nguva ichauya apo iwe uchakwanisa kubvunza wega data Chatbots nezve manzwiro emutengi uye vari kunzwa sei pamusoro pechiratidzo chako, izvi zvese zvinogona kuitwa uchifamba munzira.
Neruzivo rwekufambira mberi, makomputa anozoitawo zvirinani mukunzwisisa mhinduro uye otanga kupindura mumhinduro pane kuratidza mitsva yekutsvaga. Zvakare, imwe nhanho inowedzera mukukwanisa kubvunza mibvunzo mumitauro yechisikigo, iwe uchakurumidza kuzowana mhinduro uye mhinduro nenzira imwecheteyo. Kamwe iyo Chatbot painenge yadzidza hukama hwesemantic uye kufungidzira kwemibvunzo, inogona kuita yega kusefa uye kurongeka kwakakodzera kuti ishandise mhinduro inodzokororwa uye yakakosha, pane kungo ratidza iyo data.
Ichiri mumatanho ayo ekutanga. Chimbofunga nezve yanhasi manzwiro ongororo serudzi rwekurongeka kwaunowana paunenge uchishandisa muturikiri weGoogle kusarudza chirevo chenhau dzeFrance inova nzira inovimba zvakanyanya pazvinhu zveNLP pachayo. Iyo NLP inogona parizvino kungoona manzwiro emufaro, kutya, kunyangadza, kutsamwa, uye kusuruvara. Zvisinei, vanhu vane zvakawanda manzwiro kupfuura izvozvo.
Kubatanidza yako business intelligence software nezvose zvebhizinesi rako zvinokupa iwe data rinotyairwa analytics nguva dzese dzezuva. Panzvimbo pekuzvibvunza kuti "ndiani mutengesi anotengesa gore rino" uye kuferefeta kuburikidza nedatha kuti uwane mhinduro, iwe unozogona kungobvunza Chatbot iwo iwo mubvunzo iwoyo, uye uwane mhinduro zviri nyore sekunge iwe urikubvunza yako shamwari paWhatsApp. Iyo data inogara ichiwanika kwauri pombi, mune chero mamiriro, pane chero chishandiso.
Izvi zvinogoneka ndizvo chaizvo zvinoita kuti NLP ive yakakosha. Mumwe munhu haachafanirwe kuve neruzivo rweye chaiyo mutauro kuti ataure ne analytics software. Iyo inopa vanogumisa-vashandisi kunyangwe kuwana kwakawanda kweruzivo uye vanogona kupa ruzivo rwekuongorora kwedata.
Unoda rubatsiro neNLP mhinduro? Taura nekutaurirana